Izindaba - Ukukhuphuka kwentengo yabaphumelele i-API kwikota yesithathu kudonse amehlo abaningi
Ukuthuthukiswa komkhakha we-API kanye nomkhakha wemithi akuhlukaniseki, futhi kuyavumelana. Kuyaqondakala ukuthi ngenxa yokwengamela okuya ngokuqina kwemvelo, abakhiqizi be-API badinga ukwengeza inqubo noma ukunciphisa isikali sokukhiqiza ngaphansi kwezimo zokuqala, okuzoholela ekukhuphukeni kwentengo ye-API. Ngaphezu kwalokho, abakhiqizi bezinto ezingamakhemikhali ezikhuphukayo ze-API nabo babhekene nenkinga efanayo. Amabhizinisi we-API ambalwa kuphela angakhiqiza eminye imikhiqizo, eyakha ngokusobala isimo se-oligopoly. Ukukhuphuka kwamanani e-API kuzophinde kuthinte amabhizinisi ezemithi asezansi nomfula ngezinga elithile. Ngokusho komkhakha, intengo yempahla eluhlaza iyakhuphuka, futhi nezinkampani ezenza imishanguzo esezansi zihlala zikhala, nakho okuthinta ngqo imishanguzo yeziguli.
Umsebenzi kaZou pingming Xinghua uyisixhumanisi esikhuphukayo somkhakha wemithi, futhi ukhathazeke kakhulu ngokwenyuka kwentengo kwe-API. Muva nje, kubikwe ukuthi ukuphathwa kwamanani entengo we-State Administration of supervision market kunikeze i-China Chemical Pharmaceutical Industry Association ukuthi ihlele uchungechunge lokunikezwa kwezinto zokusetshenziswa kwamabhizinisi afanele azoya egumbini lenkomfa le-State Administration of ukugadwa emakethe. Abaholi behhovisi elibhekele intengo kanye ne-Anti Monopoly Bureau of the State Administration of the supervision market babe nokujula okujulile nokuxhumana nabamele amabhizinisi ababambe iqhaza ezinkingeni ezisentengo nasekunikezelweni kwe-API.
Amakhemikhali eZouping Mingxing azolawula ukwehla kwamanani entengo e-API ngaphakathi kohlaka lwezinqubomgomo zikazwelonke kanye nemithetho yezimakethe zomhlaba, ukuze kuhlanzwe futhi kuzinziswe imvelo yezimakethe zomhlaba.